Doorashada kuraas aan lagu tartamin oo ka dhacday Muqdisho | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Doorashada kuraas aan lagu tartamin oo ka dhacday Muqdisho
Doorashada kuraas aan lagu tartamin oo ka dhacday Muqdisho
Guddiga hirgelinta doorashooyinka Gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ayaa Maanta hoolka dugsiga tababarka Janeraal Kaahiye ee Magaalada Muqdisho ku qabtay doorashada 5 kamid ah kuraasta Golaha Shacabka.
Kursiga Koowaad ee Hop#205 oo ay ku fadhisay Sahro Cabduqaadir Cabdiraxmaan ayaa waxaa Maanta ku guuleystay Axmed Cabdi Kooshin oo mar soo noqday Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gaashaandhigga kadib markii ay tanaasushay Muno Xuseen Faarax, waxaana cod gacan taag ah oo loo qaaday uu helay 99 Cod.
Kursiga labaad HOP#263 ayaa waxaa markale ku guuleystay Muuse Saciid Jaamac oo kursigaan horay ugu fadhiyay kadib markii ay u tanaasushay Khadra Cabdi Maxamed oo la tartami laheyd, waxaana cod gacan taag ah oo loogu codeeyay uu helay dhamaan codadka ergada oo dhanaa 101 Ergo.
Kursiga Saddexaad ee HOP#240 oo ay horay ugu fadhisay Suri Diiriye Carab waxaa ku guuleystay Cali maxamuud Aadan kadib markii ay u tanaasushay Marwo, Rooda Maxamuud Axmed, waxaana cod gacan taag ah oo loogu codeeyay uu helay 98 Cod, waxaana ka aamusay 2 ruux.
Kursiga Afaraad ee Hop#271 oo uu ku fadhiyay Cabdiraxmaan Maxamuud Caateeye ayaa waxaa Maanta ku guuleystay Cali Cabdi ibraahim kadib markii ay ku tartamida kursiga ka tanaasushay Marwo farxiya Obsiiye Wacays, waxaana Ergada oo Cod gacan taag ah ugu codeeyay uu helay 90 Cod halka ay ka aamuseen Saddex Ruux.
Kursiga Shanaad ee Hop#241 oo uu ku fadhiyay Cabdirisaaq Daahir Maxamuud ayaa Maanta waxaa ku guuleystay Cabdiqani Ismaacil Saciid kadib markii ay ka tanaasushay tartanka Doorashada Marwo Ayaan Ismaaciil Cabdi, waxaana cod gacan taag ah uu ku helay 91 Cod halka ay ka aamuseen 9 Ergo.
Dhamaan doorashadii Golaha Shacabka ee Maanta lagu qabtay dugsiga tababarka Janeraal Kaahiye ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay aheyd mid aan lagu tartamin.
Doorashada kuraas aan lagu tartamin oo ka dhacday Muqdisho was last modified: February 10th, 2022 by warsan radio
Go’aano ka soo baxay Shir looga hadlayay Amniga Magaalada Garoowe